सङ्क्रमण फैलन नदिन सिमा बन्द गरेका छौँ – इन्सेक
सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश ५ सरकार
अहिले कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । नेपालमा पनि १२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ । चैत ११ गतेबाट नेपाल लकडाउनमा छ । लकडाउन ०७७ को वैशाख ३ गतेसम्मका लागि कायम छ । त्यसपछि पनि लकडाउन थपिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ । विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण रोक्नका लागि प्रदेश ५ सरकारले के कस्तो खालको सतर्कता र तयारी गरिरहेको छ त ? प्रदेश ५ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कारोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि के कस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले कारोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको पूर्ण पालना गराउनका लागि आम नागरिकलाई सचेत गराइएको छ । प्रदेशमा चार ओटा स्थानमा विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेका छौँ । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवास्थित भीम अस्पताल, बाँकेको खजुरामास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, दाङको बेलझुण्डीमा रहेको केन्द्रीय आयुर्वेद अस्पताललाई विशेष अस्पतालका रूपमा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । यसैगरी प्रदेशका १ सय ९ ओटै स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट ३ सय ५० भन्दा बढी क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएका छन् । क्वारेण्टाइनमा हाल २ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यक्ष निगरानीमा बसिरहनुभएको छ । प्रदेशमा १८/१९ ओटा जति अस्पतालमा आइसोलेशन सहितका बेडहरू निर्माण गरिएको छ । जसमा ६ सय ५० भन्दा बढी बेडहरू रहेका छन् । चार ओटा विशेष अस्पतालमा २ सय ३० भन्दा बढी बेडहरू रहेका छन् । जहाँ आइसीयू र भेण्टिलेटर सहितको सुविधा रहेको छ । केही दिन अघि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना गरीसञ्चालनमा आइसकेको छ । प्रयोगशालामा कोरोनासँग समबन्धित शङ्कास्पद बिरामीहरूको नमूना परीक्षण रिपोर्ट तुरुन्तै प्राप्त गर्न सहज भएको छ । छिट्टै नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पताल र दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ल्याव सञ्चालन सुरू गर्न गइरहेका छौँ । यसरी प्रदेशमा कारोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका सबै व्यक्तिहरूको पहिचान गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम भएका छन कि छैनन् ?
चैत ७ गते भन्दा पहिले भारतबाट नेपाल आएका २ लाख ३० हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको स्क्रिन गरिसकेका छौ । केही घरमा रहनुभएको छ र केही क्वारेण्टाइनमा रहनु भएको छ । पछिल्लो चरणमा आउनेहरू अधिकांश क्वारेण्टाइनमा रहेको हामीहरूसँग रेकर्ड छ । र, केही लुकी छिपी घरमा जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । त्यसलाई स्थानीय सरकारले खोज तलास गरी क्वारेण्टाइनमा राख्नु भएको छ ।
भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरूबाट सङ्क्रमण फैलिन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न के के काम गरि रहनु भएको छ ?
पछिल्लो समयमा सीमा नाकाहरू सबै बन्द गरिएको छ । स्थानीय प्रशासनबाट नाकाहरूमा कडाइ गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाट समुदायमा सचेतना फैलाउने काम भइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थानीय सरकारद्वारा क्वारेण्टाइन निर्माण गरिएका छन् । अपरिचत व्यक्ति वा लुकीछिपी स्थलमार्गबाट आउने व्यक्तिहरूलाई क्वारेण्टाइनमा राख्ने गरिएको छ । सचेतनालाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने कार्य गरिएको छ ।
राहत प्याकेज के कस्ता छन् ?
अहिले स्थानीय तहले विपन्न नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र वास्तविक असहाय र विपन्न परवारलाई राहत वितरण गर्ने काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा राहत उपलब्ध गराइरहेका छन् । स्थानीय तहले राहतको प्रबन्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई राहत पुर्‍याउन के कस्ता संयन्त्र छन् ?
प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा क्राइसिस म्यानेजमेण्ट कमिटी गठन गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, चार ओटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान)का प्रमुखहरू, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय सहितको समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दे जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा पनि समितिहरू गठन भई क्रियाशील छन् ।
क्वारेण्टाइन र आइसोलेशन बेड तथा परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनमा के काम भइरहेको छ ?
हामीले प्रदेशको क्वारेण्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको र्‍यापिड टेष्ट गर्दैछौँ भने आइसोलेशन बेडहरू तयारी अवस्थामा छन् । कोरोना विशेष अस्पताल पनि तयारी अवस्थामा छन् । अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति पनि तयारी अवस्थामा छन् ।
तीन तहका सरकार बीच सामन्जस्यता कायम गर्न के कस्ता पहल र प्रयासहरू भइरहेका छन् ?
मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट स्थानीय सरकारसँग सिधै भिडियो सम्वादमार्फत पनि कुरा भइररहेको छ । स्थानीय सरकारले गरिरहेका कामको विषयमा जानकारी लिने र यो विपद्को घडीमा स्थानीय सरकारलाई परेका समस्याहरूको विषयमा पनि सिधै सम्पर्क गर्न सकिने भनेर मुख्यमन्त्रीले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई भन्नुभएको छ ।
कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन भन्ने कुरा प्रदेशवासीलाई कसरी विस्वस्त पार्नुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनिसके हामीले शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको र्‍यापिड टेस्टिङ्ग र आइसोलेशन अस्पताल तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । हाम्रो प्रदेशमा ४८ जना ल्याव टेक्निसियनहरू तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ जसले प्रदेशका जुनसुकै ठाउँमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्न सक्नु हुन्छ । त्यसकारण पनि कोही मानिस उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । नागरिको स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश सरकार सम्वेदनशील छ ।
सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीहरूले यो विपद्को बेला कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?
यो महामारीको बेला प्रदेशका सबै सङ्घसंस्था, सञ्चार माध्यमले समुदायमा जनचेतना जगाउने, लकडाउनको आवश्यकताका विषयमा जनमानसमा सचेतना फैलाउने र नयाँनयाँ अपडेटका विषयमा जानकारी गराउने गर्नु पर्छ र गरिरहनु पनि भएको छ । त्यस्तै मानव अधिकारकर्मीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । समाजमा अनावश्यक रूपमा फैलाइएका अफवाहरूका विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउने, परामर्श गर्ने र अधिकार तथा कर्तव्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउने काम गर्नु पर्छ र अहिलेसम्म गरिरहनुभएको पनि छ । अन्त्यमा यो विपत्तिको बेला अग्रपङ्क्तिमा खटिइरहनु भएका सम्पुर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिहरू सबैको उच्च प्रशंसा गर्न चाहान्छु । त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूले जनमानसमा जुन सूचना प्रवाह गरिरहनु भएको छ उहाँहरू प्रति प्रदेश सरकार आभार प्रकट गर्न चाहान्छ । सबैमा सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गरेर सुरक्षित भइ दिन प्रदेश सरकारको तर्फबाट पुनः आग्रह गर्न चाहान्छु ।